Omenala nka na nka - IntoKildare
Site na nnwale ruo n'ọdịbendị, nyochaa nka niile mara mma na ihe omume ọdịnala, ememme na ebe nkiri Kildare ga -enye.
A maara Co. Kildare dị ka obodo enyi na enyi, yana ọtụtụ ihe na-aga n'ime afọ-na anyị anaghị ekwu maka mmemme ịgba ọsọ ịnyịnya. N'ezie, a maara Co. Kildare maka ọtụtụ emume ọdịbendị ya, ma ọ bụ ihe nkiri ma ọ bụ egwu egwu na egwu egwu Banlọ Ọrụ Artsbank ma ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ememme ma ọ bụ ihe omume kwa afọ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga -ahụ ma mee - gịnị ma ị jikọta nleta gị na nnukwu ihe omume kwa?
12 nsonaazụ (s)
Junior Einsteins Kildare bụ ihe nrite Mmeri Aka-On na-enye nke na-akpali akpali, itinye aka, nnwale, bara uru, mmekọrịta STEM ahụmahụ, ọkachamara napụtara na a Structured, Safe, Supervised, Educational and Fun Environment Ọrụ ha gụnyere; […]
Artslọ ọrụ nka mmụta dị iche iche na-egosipụta ihe nkiri, egwu, opera, ihe ọchị na nka.